DID: November 2007
မန္တလေးမြို့ မှလူထုဒေါ်အမာ ၉၂ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်
သက္ကရာဇ် ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အသက် ၉၂ နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သောပြည်သူ့စာဆိုရှင်
Posted by Democratic Information Department at 10:46 PM 32 comments Links to this post
ဂျပန်နိုင်ငံ၊တိုကျိုမြို့ ၊ တာကတာနိဘာဘာ ရပ်ကွက်ရှိ မြန်မာ ကုန်စုံဆိုင် ရွှေလင်းယုန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အပါအ၀င်၅ ဦးအား ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာဘဏ်ဥပဒေများအားချိုးဖေါက်ပြီး တရားမ၀င်ငွေလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်
နေသည်ဟုသံသယရှိ၍ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့တွင်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းတိုကျိုရဲတပ်ဖွဲ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၄နှစ်မှစတင်၍ယနေ့အထိ ဂျပန်နိုင်ငံရှိမြန်မာလူမျိုး ၅၀၀၀ခန့်မှဂျပန်ယန်းငွေ ၁၅ဘီလီယံ ခန့်အားမြန်မာနိုင်ငံသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း ၊ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုမရှိသောမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်း
Posted by Democratic Information Department at 1:32 AM0comments Links to this post
VOICE OF 88 GENERATION STUDENTS
သေနတ်ဒါဏ်ရာ သည်အသက်အန္တရယ်စိုးရိမ်နေရပြီးဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်ဆေးရုံမှတဆင့်ထိုင်း
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၊ နယူးယောက်ပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့
လူထုဒေါ်အမာ ၉၂ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်
Posted by Democratic Information Department at 3:30 PM0comments Links to this post
၀ါရင့်လူရွှင်တော်များဖြစ်ကြသည့်ကင်းကောင် ၊ ကျော်ထူး ၊ စိန်သီး ၊ ပန်းသီး ၊ ဇီးသီးတို့လည်းပါဝင်တင်ဆက်
အငြိမ့်မစတင်မှီအဖွင့်ပဏာမအနေဖြင့်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီအောင်လွင်၊ တေးသံရှင်ခင်မျိုးအေး နှင့်
Posted by Democratic Information Department at 2:50 PM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 12:40 PM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 12:46 AM0comments Links to this post
ကျွန်ုပ်တို့ DID မှ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏အသံ အစီအစဉ်အားအပတ်စဉ်တင်ဆက်သွားပါမည်
ထိုအစီအစဉ်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည်ကား အဖွဲ့အစည်း ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွက်ဦးတည်သွားမည်မဟုတ်ဘဲ
Posted by Democratic Information Department at 1:14 AM0comments Links to this post
နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးဂေဇက်web page နှင့်DID blog တို့တွင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်မြန်မာစစ်အာဏာပိုင်တို့ကြား Third Party ထားမည်ဟူသော
အမြစ်မရှိသည့်သတင်းများအားဖေါ်ပြနေသည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊လူပုဂ္ဂိုလ်များလည်းမဟုတ်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းဖေါ်ပြချက်များသည်ခိုင်လုံမှုမရှိသည့်သတင်းများပေါ်တွင်အခြေမခံသကဲ့သို့ လူတဦးတယောက်၊အဖွဲ့အစည်းတရပ်၏ကြိုးပမ်းရယူထားသောသတင်းများအားခွင့်ပြုချက်မရဘဲ၊
စာမျက်နှာ ၊ သတင်းဌာနများလည်းမဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့်သတင်းလွတ်လပ်မှုမရှိသောပြည်တွင်းမှအခြေအနေအရပ်ရပ်ပေါ်တွင်နားလည်ပေး
လည်းမသင့်တော်ပေ။ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ11 Media Group မှဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်၏လှုံ့ဆော်မှု
ဆောက်၍ စုစည်းညီညွတ်ကြစေရန်ဆန္ဒမှန်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့DID မှအကြံပြုအပ်ပါသည်။
မန္တလေးဂေဇက် (ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာ) ဆိုတာ....
၁။ အင်တာနက်မှ ပီဒီအက်ဖ် (PDF)ကော်ပီဖြင့် အီးမေးလ်ပို့ ဒေါင်းလုပ်ယူပုံစံနှင့်ဖြန်ချိနေသော သတင်းစာမဟုတ်ပါ။
၂။ အသင်းအဖွဲ့ ၊အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထောက်ပံ့ငွေများနှင့် ရပ်တည်ထုတ်ဝေနေသောသတင်းစာမဟုတ်ပါ။
၃။ ပါတီနိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး ဘက်လိုက်ရေးသား သာထိုးကူညီတွန်းပို့ သော သတင်းစာမဟုတ်ပါ။
၄။ ငွေကြေးနှင့် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ရောင်းချသော သတင်းစာမဟုတ်ပါ။
၅။ အခြားမြန်မာသတင်းစာများ စာစောင်ဂျာနယ်များ၏ မူ၊ဟန်၊စတိုင် တို့ကို ပုံစံယူ၊ကော်ပီကူးချ လုပ်နေသောသတင်းစာမဟုတ်ပါ။
၆။ ပုဂ္ဂလိက၊ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတို့အတွက် မြောက်ပင့်၊တိုက်ခိုက်၊တွန်းထိုးရေးသားပေးသော သတင်းစာမဟုတ်ပါ၊
ရ။ တလထွက်၊၂လပျက်၊ ၁နှစ်ပျောက် ပြောက်ကြားအဆင်ပြေသလိုလုပ်နေသော သတင်းစာမဟုတ်ပါ။
၈။ တမြို့ ဖြန့်၊တနိုင်ငံဖြန့်လက်လှမ်းမကျယ်၊ နယ်ကျဉ်းစွာဖြန့်ဝေနေသော သတင်းစာမဟုတ်ပါ။
၉။ လိုင်စင်မယူ၊အာမခံမရှိ၊အခွန်မဆောင် တရားမ၀င်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိနေသောသတင်းစာမဟုတ်ပါ။
၁၀။ မြန်မာပြည်၏ ရတနာပုံ၊ နေပြည်တော် အမည်နာမတို့နှင့် တနည်းတသွယ်ပတ်သက်ခြင်းရှိသော သတင်းစာမဟုတ်ပါ။
၁၁။ မည်သည့်မြန်မာအသင်းအဖွဲ့ အဖွဲ့ အစည်းနှင့်မျှ မသက်ဆိုင်၊ဟူ၍သီးခြားရပ်တည်မည့် တထီးတည်းသတင်းစာမဟုတ်ပါ။
၁၂၊ သတင်းနယ်မြေကျဉ်းတွင် ဆင်ဆာဖြတ် ဘောင်ခတ်ရေးသားသော သတင်းစာမဟုတ်ပါ။
၁၃။ အခြားလူမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းအောက်တွင်နေ၍ လွှမ်းမိုးခံ လောင်းရိပ်မိနေမည့် သတင်းစာမဟုတ်ပါ။
၁။ လစဉ်စောင်ရေ ၁၂၀၀၀ ၊စာမျက်နှာ ၂၄ မျက်နှာဖြင့် ၁၇လက်မ ၂၂လက်မအရွယ်ဆိုက်ဖြင့် ပုံနှိပ်ဖြန့်ချိသောသတင်းစာဖြစ်သည်။
၂။ စာပေ၀ါသနာပါသူ၊မြန်မာအမျိုးချစ်သူတို့ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အိတ်စိုက်ငွေနှင့် ကြော်ငြာထည့်သောလုပ်ငန်းရှင်များ၏ကြော်ငြာခတို့ဖြင့် ရပ်တည်ထုတ်ဝေသောသတင်းစာဖြစ်သည်။
၃။ အမျိုးသားအရေး၊ လူများစုသဘောတို့ဖက်မှ ရပ်တည်၊ကူညီရေးသားသော သတင်းစာဖြစ်သည်။
၄။ အခမဲ့ ထုတ်ဝေသော သတင်းစာဖြစ်သည်။
၅။ စာပေအတွေ့အကြုံရှိပြီးသူများမှ မိမိကိုယ်ပိုင်မူဟန်ဖြင့် စဉ်းစားကာ အမြဲသစ်ဆန်းအောင်ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းနေသော သတင်းစာဖြစ်သည်။
၆။ အနုပညာသည်များ၏ လူအများသိလို၍တောင်းဆိုလာသောသတင်း၊ လူမူရေးသတင်းများကို ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်မည့် သတင်းစာဖြစ်သည်။
၇။ လစဉ်ပုံမှန် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး လူအများလက်ခံကာ အောင်မြင်နေသော သတင်းစာဖြစ်သည်။
၈။ ကမ္ဘာအနှံ့ ၊မြို့ အနှံ့ တောင်းဆိုမှုရှိသော မည်သည့်နိုင်ငံသို့မဆို စာပို့ခပါအကုန်အကျခံကာ ဖြန့်ချိပေးနေသော သတင်းစာဖြစ်သည်။
၉။ ရုံးစိုက်ရာ၊ပုံနှိပ်ရာနိုင်ငံဖြစ်သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ တရားဥပဒေကို လိုက်နာကာ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသော သတင်းစာဖြစ်သည်။
၁၀။ ၁၈၇၄ထုတ် ပထမဆုံးသော မြန်မာပိုင်မြန်မာသတင်းစာ စစ်စစ်၏ အမည်နာမ ပညတ်ချက်တခုကို ဘိုးဘွားအမွေအဖြစ် အမည်ယူသုံးထုတ်ဝေသော ပထမမြန်မာသတင်းစာဖြစ်သည်။
၁၁။ (မြန်မာ) ဟူသောတူညီသည့် စံနှုန်းအောက်တွင်ရှိသော မည်သည့် အသင်းအဖွဲ့၊ သတင်းအဆက်များနှင့်မဆို လက်တွဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် သတင်းစာဖြစ်သည်။
၁၂။ အမိမြန်မာပြည်နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားနေမြန်မာများအတွက် ပေါင်းကူးရပ်တည်ပေးနေသော သတင်းစာဖြစ်သည်။
၁၃။ မြန်မာ ဖြစ်ရသည်ကို အစဉ်အမြဲဂုဏ်ယူသော သတင်းစာဖြစ်သည်။
Posted by Democratic Information Department at 9:06 PM0comments Links to this post
အာဏာပိုင်များအား အဆိုတော် G-TONE တရားစွဲပြီ
ရန်ကုန်။ ။နိုဝင်ဘာ ၂ဝ
ပြီးခဲ့သည့်စနေနေ့( နိုဝင်ဘာ၁၇)ရက် ၌ကျင်းပခဲ့သောမြရိပ်ညိုပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွင်လူငယ်အဆိုတော်များနှင့်
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအချင်းများပြီးပွဲပျက်သွားကြောင်းသိရသည်။ဖြစ်ပွါးပုံမှာလူငယ်ရက်ပ်အဆိုတော် G-TONEမှသီချင်းဆိုရင်းအကျီကိုလှန်ပြရာသူ၏ကျောတွင်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရှစ်ခိုးနေသည့် ဆေးမင်ကြောင်
အဆိုတော် G-TONE မှရှင်းပြရာတွင်သူသည်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်ဖြစ်သဖြင့်ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီး
သို့သော်လည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိသောမြန်မာနိုင်ငံတွင်တိကျမျှတ ၊ မှန်ကန်သောတရားကျင့်ထုံးများဖြင့်
Posted by Democratic Information Department at 12:32 AM0comments Links to this post
မြန်မာစစ်အာဏာပိုင်များနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြား Third Party ထားမည်
ရန်ကုန်။ ။နိုဝင်ဘာ ၁၉
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်တို့စိမ်းလဲ့ကန်သာဧည့်ဂေဟာတွင်၁၉ ရက်နေ့ တွင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြသည်ဟုသတင်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲအရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ
စောင့်ကြည့်နေရမည့်အခြေအနေ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်ဖြစ်သောအခြေခံ
လူ့အခွင့်အရေးများရရှိရေး ၊ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်ဦး ၊ဦးဝင်းတင်၊ ဦးခွန်ထွန်းဦးအစရှိသော
နိုင်ငံရေးပါတီများမှခေါင်းဆောင်ကြီးများ၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့်နိုင်ငံရေး
ရန်ကုန်မြို့ ရှိဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်နေသူများမှ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးအားနှိုးဆော်
ထားကြောင်း DID သို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Posted by Democratic Information Department at 11:55 PM0comments Links to this post
နိုဝင်ဘာ ၁၈ ၊၂၀၀၇
ဆောင်းပါးရှင် သားချစ် ( ဟစ်တိုင် ) ၏ "ကေအိုင်အို ထိမ်းချုပ်ရာ လိုင်ဇာမြို့တွင် လူ့အခွင့်အရေး သင်တန်းကျင်းပပြုလုပ်ပြီးစီး ဟူသော" ခေါင်းစဉ်ပါ ဟစ်တိုင်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းသတင်းဆောင်းပါးအား
ယဉ်ကျေးမှု ကူးလူးဆက်ဆံခြင်းခံရ၍ ပြုပြင်ထားသော စီးပွားရေးအသုံးချ ကချင်ဝတ်စုံနှင့် ကချင်အမျိုးသမီးများ
Posted by Democratic Information Department at 6:17 AM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 11:52 PM0comments Links to this post
သန်းသန်းလေး သည် စိန်ချစ်ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်ပါသည်၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူသန်းရွှေနှင့်စစ်အုပ်စုအားထောက်ခံ ၊ အားပေး ၊ ပူးပေါင်းသူအားလုံးကို
တာဝန်အရဖေါ်ထုတ်ကြရမည်ဖြစ်ပြီး ၊ ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တာဝန်ရှိသူများ
Posted by Democratic Information Department at 1:10 PM0comments Links to this post
ကျုပ်တို့တွေကအဲဒီလို SHOW ပွဲတွေကို
Posted by Democratic Information Department at 11:51 AM0comments Links to this post
အဆီပျံဟင်းများ UN ကိုယ်စားလှယ်ကြည့်ရှုခဲ့ရ
Posted by Democratic Information Department at 11:42 AM0comments Links to this post
BURMA NEEDS PRIORITY ATTENTION FROM ASEAN, SAYS UN OFFICIAL
For immediate release: 17 November 2007
Bangkok, Saturday – Burma’s human rights situation is still urgent and deserves priority attention from leaders attending the ASEAN Summit in Singapore, said UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Burma, Professor Paulo Sergio Pinheiro here today. “Regional governments, individually and as members of the United Nations, have an important role in working for the improvement of human rights in Myanmar. I have said this on numerous occasions in my meetings and discussions with representatives of ASEAN and ASEAN members. “Therefore, it is my sincere hope that the critical situation in Myanmar receives serious consideration at the ASEAN Summit,” said Prof. Pinheiro. He made the statement on the record duringameeting with human rights groups in Bangkok this morning, shortly after completingafive-day visit to Burma. While Prof. Pinheiro said that the details of his findings would be presented in an official report to the UN Human Rights Council, he confirmed that he found no improvements in the human rights situation and reiterated concerns over the harsh detention conditions faced by political prisoners. Regional human rights activists welcomed Prof. Pinheiro’s statement and urged leaders at the ASEAN Summit not to backslide on pressure for the Burmese military regime to engage in genuine reforms. “Professor Pinheiro was allowed to visit Burma after being barred by the military regime for four years. We believe that his visit wasaconsequence of increased international pressure, so pressure must be sustained to ensure that it brings genuine, positive results,” emphasized Debbie Stothard, coordinator of the Alternative ASEAN Network on Burma (Altsean-Burma) . “The human rights violations in Burma have affected human security in this region, therefore ASEAN leaders havearesponsibility to ensure that the military regime ceases its violations,” said Ms Stothard. The agenda of the 13th ASEAN Summit, which begins in Singapore tomorrow, is likely to be overshadowed by the severe economic and political deterioration in Burma that saw fuel prices rise by up to 500%, nationwide protests, and street killings of Buddhist monks. Meanwhile the military offensive in Eastern Burma against ethnic Karen communities has intensified, displacing 76,000 civilians, with 25,000 facing imminent starvation this year.
Debbie Stothard. Cell +6681 686 1652.
Posted by Democratic Information Department at 11:28 AM0comments Links to this post
USDA start hate campaign against Daw Aung San Suu Kyi
The Union Solidarity and Development Association (USDA) has begun to spread canards about Daw Aung San Suu Kyi among villagers in different townships in Mon state.
The USDA has briefed its members to tell the people that though Daw Suu was given many honours, she never did anything for the cause of development for the people in the Burma . Whatever has been done in terms of development has been done by the State Peace and Development Council such as building bridges, roads, and other development works.The junta backed USDA campaign aims to ensure that there is no support for Daw Suu from among the people if demonstrations take place again in the future.A source close to the USDA member, said they (USDA) speak ill of Daw Suu to distance her from the people. The members were told to tell the people about the optimism the SPDC is generating.HoweveraMoulmein resident in Mon State said “They (SPDC) have done nothing for the people. If they actually worked for the people, they (people) would not have any trouble.”“Why didn’t they build roads and bridges in Chaungzone Township , Mon State ? They do things for their own benefit. That’s why there is no hope for thepeople. They are only interested in the business run by the Burma Army, he said.
USDA began their campaign in Kyaikmayaw Township on November 10 and are continuing their campaign in other townships, he added.SPDC chairman, Senior General Than Shwe has urged the USDA to join hands with the people in carrying out the seven step road map to “disciplined democracy” and in buildinganew state, according to The New Light ofMyanmar controlled by the military regime. USDA has 29 million members and was formed in 1993, according to The New Light of Myanmar.
Posted by Democratic Information Department at 11:22 AM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 11:10 AM0comments Links to this post
Icon returns: Sylvester Stallone on location in Thailand.
Sylvester Stallone's Green Beret, who started asatragic representation of Vietnam veteran neglect in the original film and morphed intoasuperhero soldier by the third, is back forafourth outing.
The movie's story, which borrows from tales of real-life atrocities but is otherwise fictional, involves Rambo reluctantly helping missionaries traverse the wilderness of the Salween River on their way to deliver supplies to camps of war-ravaged refugees.
"He realizes his entire existence has been for naught," Stallone says. "Peace is an accident, war is natural. Old men start it, young men fight it, everybody in the middle dies, and nobody tells the truth. He says, 'You think God's going to make it all go away? What has he done and changed in the world? He has done nothing. We are an aggressive animal and will never be at peace.' That's how he feels."
When he encounters the human-rights workers, they "somehow touch the last remaining nerve in Rambo's body," Stallone says.
The movie is titled simply Rambo, without any sequel number, similar to Stallone's recent Rocky Balboa, the sixth film in that franchise, which was praised by critics and fans for restoring integrity to the iconic underdog boxer.
Similarly, this fourth Rambo seeks to rehabilitate the tortured soldier's tale that even Stallone acknowledges strayed too far into fantasy when Rambo III came out in 1988.
Stallone, 61, says he let fame get to his head with some of those previous sequels and didn't maintain the heart that made the originals iconic.
"When you'reakind of nondescript, unknown, inconsequential actor and all ofasudden you're famous, it's very easy to lose touch there," Stallone says.
"You keep pushing the envelope, but there isalimit, and the audience retreats."
Posted by Democratic Information Department at 12:46 PM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 12:37 PM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 2:44 AM0comments Links to this post
မြန်မာနိုင်ငံ၏သင်္ကန်းရောင်တော်လှန်ရေးဟုကမ္ဘာမှအသိအမှတ်ပြုခဲ့ရသည့် ၂၀၀၇ ခုနှစ် သံဃာတော်များဦးဆောင်သည့်အကြမ်းမဖက် နှလုံးရည်တိုက်ပွဲအတွင်းထိပ်တန်းမှဦးဆောင်
ပေးခဲ့သော ဆရာတော် အရှင်ဂမ္ဘီရ အားစစ်တပ်မှဖမ်းဆီး လိုက်ပြီဟုသတင်းများပေါ်ထွက်
နေသော်လည်းအတည်ပြုချက် ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့မှကြိုးစားဆဲပင်ဖြစ်ပါသည် ။
Posted by Democratic Information Department at 2:11 AM0comments Links to this post
နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ တွင်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့သော (၄၄)ကြိမ်မြောက်ရုပ်ရှင်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲနှင့်မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နေ့အခမ်းအနားအားကျင်းပခဲ့ပါသည် ။
မြန်မာနိုင်ငံ၌မည်သည့်နိုင်ငံရေး ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း ၊ မဆို သန်းရွှေ စစ်အုပ်စု၏လက်အောက်၌ လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိသကဲ့သို့ ဘယ်သူသေသေ ငတေ မာလျင်ပြီးရောဆိုသည့်
တဘို့တည်းကြည့်တတ်သည့် အတ္တသမားများ ၊ ဖော်လံဖားနေကြသောလူပုဂ္ဂိုလ်များကြောင့်အဖွဲ့အစည်းများ
သောကိုကျော်သူအနေဖြင့်မိစ္ဆာစစ်အုပ်စုများ၏အနိုင်အထက်ပြုမှု ၊ မတရားမှုများအားကြံကြံခံရင်ဆိုင်
Posted by Democratic Information Department at 12:55 AM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 2:08 PM0comments Links to this post
UN human rights envoy probes Burma violence
Rangoon (dpa) - United Nations Special Rapporteur Paulo Sergio Pinheiro on Monday launched an investigation into claims that the ruling junta beat up, killed and burned the bodies of Buddhist monks and their followers inabrutal crackdown last September. UN human rights expert Pinheiro, who arrived in Rangoon Sunday after being deniedavisa to visit the country since 2003, has been on the move since his plane touched down, sources said. On Sunday he visited pro-government Kya Khat Waing Buddhist Monastery in Bago, 80 kilometres north-east of Rangoon, before returning to the city to visit the Shwedagon Pagoda, which was the rallying point for the peaceful monk-led marches that rocked Rangoon in September.
The protests ended on September 26-27 when the government unleashed its forces on monks and their laymen followers, beating and shooting them into submission.
The crackdown on monks for conducting peaceful protests inapredominantly Buddhist country shocked the world and brought Burma's military back into the international spotlight of condemnation.
The government claims that only 10 people died in the incident. Other sources claim the death toll was closer to 200. Up to 3,000 people were arrested during and after the crackdown, of whom an unknown number remain in jail.
One of Pinheiro's tasks is to verify the number of deaths and detentions, inacountry that is notorious for hiding the truth.
Observers said Pinheiro, no stranger to Burma, had planned his itinerary well. Abbots at the Kya Khat Waing Monastery were among the few to condemn the September protests and to chastise the monks for getting involved in politics.
First he visited Kabaraye, the seat of Burma's Sangha, or the Buddhist hierarchy similar to the Catholic Church's senior clergy. Pinheiro held talks with the 47-man Sangha, the outcome of which was not disclosed.
Pinheiro was scheduled to visit Rangoon's Insein Jail Monday afternoon, and the Government Technical Institute, where hundreds of people were detained in the aftermath of the September crackdown.
He is expected to leave Rangoon Tuesday morning for Naypyidaw to meet with ministers and representatives of the junta.
"Mr Pinheiro very much welcomed his return to Myanmar, in the context of the mandate entrusted to him by the United Nations Human Rights Council," saidaUN statement released Sunday night, using the junta's name for the country.
The fact that the Burmese regime has granted Pinheiroavisa is deemed one of several positive signs that they are bowing to international pressure to hasten the process of national reconciliation.
Pinheiro's visit follows fast on the heels of UN special envoy Ibrahim Gambari, who was in Burma between November 3-8.
Gambari persuaded the junta to allow opposition leader Aung San Suu Kyi to meet with her National League for Democracy colleagues on Friday and hold talks with the government's "minister of relations" Aung Kyi.
After Friday's meetings Suu Kyi expressed some optimism about the junta's willingness to startaprocess towards national reconciliation. The 1991 Nobel peace laureate has been under house arrest since May, 2003, and has spent 12 of the past 18 years in detention.
There is still great scepticism that the military, which has ruled Burma for the past 45 years, has any real intention of sharing power with civilian politicians in the near future.
Although Suu Kyi's party won the 1990 election byalandslide, the military has denied it any power for the past 17 years.
Gambari has the tough job of persuading the xenophobic generals to initiateadialogue which would ultimately loosen their iron grip on power.
Posted by Democratic Information Department at 3:28 AM 1 comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 3:08 AM0comments Links to this post
သက္ကရာဇ် ၂၀၀၇ ခုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံ၏ကံကြမ္မာဟောစာတန်းhttp://www.narinjara.com/bur_astrology.asp
တနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်မင်းသည် ၊ အောက်မဲညိုပွင့် အဆင်းနှင့်တူသော တန်းဆာကို ၀တ်ဆင်လျက် ဘီးလူး ကိုစီးကာ လက်တဘက်က ထင်းမီးကို ကိုင်ဆောင်၍ နောက်လက်တဘက်ကား ၀မ်းကိုိ ပိုက်လျက် ၊ အရှေ့ မြောက်ထောင့်ကနေ၍ ၊ အနောက်တောင်ထောင့် အရပ်သို့ ဝင်၏ဟု ဆိုသောကြောင့် နအဖစစ် အစိုးရသည်ပြည်သူပြည်သားများ အပေါ်၌၎င်း၊ သူတို့ နှင့်အဆင်မပြေသော နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် များ အပေါ်၌၎င်း၊ လက်နက်ကိုင် ပါတီအချို့ ကို၎င်း ၊ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်စွာ အမှားမှား အယွင်းယွင်း ပြုမူဆက်ဆံမည်ဖြစ်သည်။သို့ အတွက်ကြောင့် ပြည်တွင်း ဆူပူသောင်းကျန်းခြင်း၊ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ခြင်း များကြောင့် စစ်တပ်တွင် မညီညွတ်ဖြစ်ကာ သွေးမြေကျ၍ လူအသေ အပျောက်များမည။်
(၉) ဂဏန်းအရကား - မတ်လ(၁၂) ရက်နေ့ မှ ဧပြီလ (၂ရ)ရက်နေ့ အတွင်း၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံ ရေး၊ စစ်ရေး အခြေနေသည် ကံကြမ္မာ အဆိုးရွားဆုံး အခြေအနေသို့ကျရောက်မည် ဖြစ်သဖြင့် နအဖ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များအဖို့အတိုက်အခိုက် ခံရခြင်း၊ ထိခိုက်မှုဖြစ်၍ ပျက်စီးခြင်း၊ ရန်များခြင်း၊ အတိုက်ခံ ပေါများခြင်း တို့ ကြောင့်အသေ အ ပျောက်ရှိမည်။ ခေါင်းမာ၍ မိုက်ရူးရဲလုပ်သဖြင့် အမှား အယွင်း ရှိကာ ဘေးအန္တရာယ်တွေ့ မည်။ မီးဘေး ၊သေနတ် ၊ဗုံးအန္တရာယ် များကြောင့် ပျက်စီးများမည် ။ တပ်တွင်းရန်နှင့် မိသားစုရန်များလည်း ပေါ်ပေါက် လိမ္မည်။ ပြည်ပမှဝင်၍ စွက်ဖက်ခြင်းကို အလိုမရှိ ၊ပြည်တွင်း ပြဿနာ ကိုလည်း ၄င်းတို့ ကိုယ်တိုင် မဖြေရှင်းနိုင်၊ နိုင်ငံရေး စစ်ရေး အရလည်း မငြိမ်ချမ်း သည့်အပြင် အမျိုးသားညီလာခံ နောက်ပိုင်း ပေါ်ပေါက်လာမည့် ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲလည်း အောင်မြင်မှုမရသဖြင့် ဆင်းရဲ ဒုက္ခများစွာတွေ့လတ္တံ။
ဗိုလ်သန်းရွှေသည် စနေဂြိုဟ် ပထမပိုင်းဖြစ်သော ယခုအသက် -၇၃-မှ -၇၇-နှစ်အကြား ကာလတွင် အပျက်ဖက်သို တဖြည်းဖြည့်း ရွေ့ လျော့ လာလေသည်။ ၇၃- နှစ်နှင့် -၇၅- နှစ် (၆) လ အကြား ကာလ များတွင် ပျက်စီးမည်၊ အသေဆိုးဖြင့် သေရနိုင်ပြီး မသေခဲ့လျင်- ၇၅- နှစ်ခွဲကာလမှ -၇၇-နှစ် ကာလ များတွင် ရောဂါ ကြီးများ ရ၍၎င်း၊ ထိခိုက် ပြစ်ဒါဏ်ချက်ကြောင့်၎င်း မလွဲမသွေ သေဆုံးရမည် ဖြစ်ပေ သတည်း။ ယခုနှစ် တွင် ဗိုလ်သန်းရွှေအဖို့ရောဂါကြီးများ ခံစားနေရ၍၎င်း၊ မိမိစိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်မလာ၍၎င်း၊ တပ်တွင်း ပဋိက္ခ များ ကြောင့်၎င်း၊ ပြည်တွင်း ပဋိက္ခများကြောင်း၎င်း၊ ပူပင်သောကရှိမည်။ စားမ၀င် အိပ်မပျော်ဘဲ ကြောင့်ကြ စိုးရိမ်စိတ်များနှင့် နေ့ စဉ် ရင်ဆိုင်တွေ့ ကြုံ ရလတ၊္တံ အပျက်အစီး ဆုံးရှုံမှုများနှင့် အကြီးအကျယ် ကြုံတွေ့ ရလိမ္မည် ဖြစ်ပါသည်။
တို့ ကြောင့် နအဖ စစ်အစိုးရသည်၊ သက္ကရာဇ်- ၂၀၀၇- ခုနှစ်တွင် အိုင်အယ်လ်အို ကို၎င်း၊ အာစီယံ ကို၎င်း၊ ယူအန်လုံခြုံရေးကောင်စီ စကားကို၎င်း နားမထောင်သည့်အပြင် နာမည်ကြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား များကိုလည်း လွတ်မပေးဘဲ သူတို့ အာဏာမြဲရန်အတွက် ပရိယာယ် အမျိုးမျိုး သုံးပြီး အတိုက်ခံများကို တိုး၍ ရက်စက်ကာ ခေါင်းမာအုပ်ချုပ်နေမည်ဖြစ်သောကြောင့် မတ်လ (၂၁)ရက်မှ ဧပြီ(၂၇)ရက် အ တွင်း၌၎င်း စက်တင်္ဘာ၊ အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်္ဘာလများတွင်၎င်း အထက်ဖေါ်ပြပါ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါး ရေး၊ ဘာသာရေး၊ ပဋိပက္ခတို့ သည် အဆိုးဝါးဆုံး အခြေနေသို့ ရောက်ရှိ လာမည် ဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံရေး စစ်ရေး စီးပွားရေး ငြိမ်သက်မှု မရှိဘဲ ဆိုးဝါးနေသောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ နေထိုင် ကြသော သန်း(၅၀)သော ပြည်သူပြည်သားတို့ သည်လည်း ကပ်ကြီးဆိုက်ကာ ဆင်းရဲဒုက္ခ အမျိုးမျိုးကို အလူးအလဲ ခံကြရပေမည်။
(၅) ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးသမားများ ဖြစ်ကြသော (စီအာပီပီ-အန်အလ်ဒီ)၏ ခေါင်းဆောင်တို့ သည် ပြည်သူ့ လွတ်တော်ခေါ်ခြင်း ပိတ်ထားသော ရုံးများကို ပြန်ဖွင့်ခြင်း စင်ပြိုင်အစိုးရ ထူထောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါက ဒီနှစ်အတွင်း နအဖ ပြုတ်ကျ၍ ဒီမိုကရေစီအရသာကို ပြည်သူပြည်သားများ ခံစားရကြပါလိမ္မည်။
နိုင်ငံတကာ အခြေအနေကိုဗေဒင်ဟောရသော် ယခုနှစ်သည် (၉)ဂဏန်း ဖြစ်သောကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးတွင် စစ်ရေး နိုင်ငံရေးများ ရှူပ်ထွေး ပွေလီလတ္တံ ။ နိုင်ငံအသီသီးတွင် နိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင် များ ထိခိုက် ဒါဏ်ရာရခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ အပြောင်းအလွဲရှိခြင်း များကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ နေသော တိုင်း သူ ပြည်သားများ ဆင်းရဲဒုက္ခများလိမ္မည်။ အထူသဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ မငြိမ်သက်မှုများ ရှိလိမ္မည်။ အကြမ်း ဖက်ခြင်းရှိမည်၊ ဗုံးဖောက်ခြင်း ၊ ပြန်ပေးဆွဲခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဆန္ဒပြခြင်းများရှိမည်။ မူဆ လင်ဘာ သာဝင်တို့ အကြမ်းဖက်ခြင်းကြောင့် ဘာသာရေး ပဋိက္ခများရှိမည်၊ မူဆလင်ဘာသာ ကိုးကွယ် သော နိုင်ငံများတွင် အထူးသဖြင့် များများစားစား အထိအခိုက် အပျက်အစီးရှိမည်။ နိုင်ငံရေး အရ ရှုပ်ထွေးလတ္တံ။
Posted by Democratic Information Department at 5:18 AM 1 comments Links to this post
As you know, I have just completedamission to Myanmar from3to 8November, where I met today with Daw Aung San Suu Kyi. In my capacity as Special Adviser to the Secretary-General for Myanmar, I wasauthorized by Daw Aung San Suu Kyi to make the following statement onher behalf:• I wish to thank all those who have stood by my side all this time, both inside and outside my country. I am also grateful to theSecretary-General of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon, for hisunwavering support for the cause of national reconciliation, democracyand human rights in my country.
• I welcome the appointment on 8 October of Minister Aung Kyi asMinister for Relations. Our first meeting on 25 October wasconstructive and I look forward to further regular discussions. Iexpect that this phase of preliminary consultations will conclude soon so thatameaningful and timebound dialogue with the SPDC leadershipcan start as early as possible.
• In the interest of the nation, I stand ready to cooperate with theGovernment in order to make this process of dialogueasuccess and welcome the necessary good offices role of the United Nations to helpfacilitate our efforts in this regard.
• In full awareness of the essential role of political parties indemocratic societies, in deep appreciation of the sacrifices of the members of my party and in my position as General Secretary, I will beguided by the policies and wishes of the National League forDemocracy. However, in this time of vital need for democraticsolidarity and national unity, it is my duty to give constant and serious considerations to the interests and opinions of as broad arange of political organizations and forces as possible, in particularthose of our ethnic nationality races.
• To that end, I am committed to pursue the path of dialogue constructively and invite the Government and all relevant parties tojoin me in this spirit.
• I believe that stability, prosperity and democracy for my country,living at peace with itself and with full respect for human rights, offers the best prospect for my country to fully contribute to thedevelopment and stability of the region in close partnership with itsneighbours and fellow ASEAN members, and to playapositive role as arespected member of the international community.
I am now scheduled to return to New York to brief theSecretary-General on all the aspects of my mission. I will thereforenot be able to take any questions at this time.
Posted by Democratic Information Department at 4:43 PM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 4:32 PM0comments Links to this post
ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည်နဲ့ကျုပ်တို့ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် အလုပ်ပိုလုပ်ကြရအောင်
ဓာတုအဆိပ်သင့်စေသောထိုး ဆေးများ စစ်ခွေးများထိုးပေးခဲ့သည်ဟု အတည်ပြု
ယမန်နေ့ ၌အင်တာနက်သတင်းစာမျက်နှာတခုဖြစ်သည့် ဧရာဝတီ သတင်းဌာနမှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်
သည့်သတင်းတင်ပြခဲ့ရာတွင်နိုင်ငံတကာရှိမျိုးချစ်မြန်မာတို့ ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုတို့ သည်
လှမ်းရေးမှအရာရှိဟောင်းကြီးတဦှး၏အတွေ့အကြုံအရဖြစ်တန်ရာခြေရှိသည်ဟုလည်းတွက်ဆနေကြပါသည် ။ ထိုစစ်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်းသည်သူမြန်မာပြည်တွင်တာန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့စဉ်ဤကဲ့သို့လုပ်ကြံမှု
မရသကဲ့သို့ မြန်မာ့လူထုဘ၀၏ကံကြမ္မာဟုလည်းဆိုနိုင်ပေသည်။ သို့ ဖြစ်ပါ၍ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့်အတည်ပြုနိုင်
နေကြသော သတင်းသမားများ၏ ကျင့်ဝတ် သိက္ခာများကို ခေတ္တမေ့ထားကြပြီး ထမင်းဝဗိုက်ပြည့်
လျင်ပြီးရောဆိုသည့်သတင်းသမားမျိူးမဟုတ်သည့် ကိုယ့်အချိန် ၊ ကိုယ့်ငွေ ၊ ကိုယ့်ဘ၀များ အားအရင်းအနှီးပြုပြီးတိုင်းပြည်အကျိုးဆောင်ရွက်နေသည့်တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် သတင်းသမားများ
စုစည်းကြ၍ဤကဲ့သို့ သောသတင်းများအားစုပေါင်းအသည်ပြုချက်ရယူနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသင့်ပေသည် ။
ရဲဘော်များသည် မိမိတိုင်းပြည်အနာဂါတ်ကံကြမ္မာအားမည်သည့်နိုင်ငံ၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း
များ၏မူဝါဒသဘောထားအပေါ်တည်မှီအားကိုး၍ နိုင်ငံရေး ၊ တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုများအား
သာ စစ်ခွေးများအားမြေလှန်ဖယ်ရှားနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မှယုံကြည်ပေသည် ။
အရောင်တင်ဆီလိမ်းနေသည့် လေလှိုင်းအသုံးချ အာနှင့်ရင်းထမင်းရှာစားနေကြသူများ ၊ နိုင်ငံရေးသမား၊ နိုင်ငံရေးသုတေသီများ၊ နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်တတ်သိသူများအဖြစ်မိမိကိုယ်မိမိကင်ပွန်းတပ်ထားသူများမှလည်း
မရောင်ရာဆီလူး တော်လှန်ရေးအညွန့်ခူးစား သူဘ၀များကို အမြန်ဆုံးစွန့် လွှတ်ရန်လိုအပ်နေပေပြီ ။ မိမိတတ်သိနားလည်မှုများသည်ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသင်ပုန်းကြီးမှသင်ကြားပေးခဲ့သော
လူထုတိုက်ပွဲအတွင်းလူထုနှင့်တသားတည်း ပြန်လည်တိုက်ပွဲဝင်ရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် ။
အန္တရာယ်များကြားမှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘ၀အားအမြန်ဆုံးကယ်တင်ကြ ၊
ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးအလုပ်ပိုလုပ်ကြ ။ ။
Posted by Democratic Information Department at 1:17 PM3comments Links to this post